Usho kanjani ngesiJalimane, usho kanjani ngesiJalimane? Bangane bafundi abathandekayo, kule ndatshana, sizokhuluma ngemishwana enjengokuthi unjani, unjani, unjani, okungenye yemishwana yokubuza ngesimo sakho ngesiJalimane. Njengoba ungakhumbula kusuka emaphethini wenkulumo yaseJalimane, ibinzana lokuthi unjani ngesiJalimane lingabuzwa ngezindlela ezilandelayo.
(vi: ge: t esinaliti)
Hlanganisa isisu, dansa
Ngabe unjani ngesiJalimane futhi izimpendulo ezingaba khona kulo mbuzo zingakhonjiswa njengenhla. Sifisela wena impumelelo ezifundweni zakho zaseJalimane.
Amagama esiJalimane aqala ngohlamvu G